क्यान्सरबाट बच्न माछाको बोसो ! एकचाेटी पढाैँ - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it पेटको सम्बन्धी रोगहरुको उपचारका केहि घरेलु उपाय
Up Next यी खानेकुराहरु भुलेर पनि खाली पेटमा नखानुहोस् , विष बराबर हुन्छ !
22 hours ago Pradeep Karki
24 hours ago biplov
सावधान ! विष खाए बराबर हुन्छ यस्ताे आलु खादा
उखुको जुस पिउँदा यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, जान्नुहाेस्
गर्मीका बेला हामी प्रायजसो उखुको रस पिउँछौं । यसले आँतलाई शितल बनाउँछ । यसका कयौं फाइदा छन् । जण्डिसको समस्यामा…
​छाला सुन्दर बनाउनु छ भने यी पाँच वनस्पति प्रयोग गर्नुहोस
सबैलाई राम्रो र सुन्दर हुन मन हुन्छ। राम्रो हुनको लागि महँगो खालको क्रिम लगाउनु पर्छ भन्ने छैन । आफुले अलिक बडी…
पाठेघर बाहिर बच्चा बस्नुको छ यस्तो कारण, यसको लक्षण र उपचार
महिलाहरूको गर्भावस्था आफैँमा जटिल प्रक्रिया हो किनभने यसमा दुई जीवनको सवाल हुन्छ, बच्चा र आमाको । त्यसकारण गर्भावस्थामा कम्तीमा तीन…
कसरी हुन्छ त मृगौला खराब ? जानिराखौँ यसका बारेमा केही महत्वपूर्ण जानकारी
कसरी हुन्छ त मृगौला खराब ? जानिराखौँ यसका बारेमा केही महत्वपूर्ण जानकारी: १ पानी कम पिउनाले यदि तपाइँ नियमित पानी…
रेड मिट, क्यान्सरको कारक
मासु शरीरका लागि फाइदाजनक नै छ । यसबाट पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन र फ्याट प्राप्त हुन्छ । तर, मासुको बढी प्रयोग…
पटक-पटक पिसाब किन आउनुछ, यस्त छन् कारण जानिराखौँ
धेरै पानि पिउदा पनि कहिले कहिं पटक-पटक पिसाब लाग्छ । यसको एउटा मात्र कारण हुँदैन । तर, सामान्य अवस्थामा पटक-पटक…